Pangu dia mandefa ny kinova voalohany amin'ny jailbreak ho an'ny Mac | Vaovao IPhone
Pangu dia mandefa ny kinova voalohany an'ny jailbreak ho an'ny Mac
Araka ny noeritreretinay azy, Pangu dia tsy naka lava toa an'i TaiG. Tao anatin'ny minitra vitsy monja dia nanambara ny ekipa mpijirika sinoa fa ny kinova voalohany ny fitaovana hampiasanao ny jailbreak mankany amin'ny iOS 9.0-9.0.2 ho an'ny Mac. Manana izany amin'ny tranokala Pangu ianao mg.pangu.io ary tokony faingana ianao hisintona azy, satria azo inoana fa ao anatin'ny minitra vitsy manaraka dia hanomboka hihisatra ny mpizara Pangu noho ny haben'ny fangatahana.
Amin'ny maha kinova 1.0.0 an'ny Pangu 9 an'ny Mac, tsy misy lisitry ny fanovana mihoatra ny naoty "kinova voalohany". Amin'ny maha-dikan-teny voalohany antsika ary tsy misy fifandraisana lavitra avy amin'ireo hackers sinoa, azontsika an-tsaina fa ny kinova farany dia ahitana ny fonosana "Pangu 9.0.x Untether" sy "Patcyh", saingy azo inoana fa kinova tsy dia mandroso noho ny Windows io iray. KOA mety hahita olana isika, ho isan-jato ambany amin'ny fahombiazana rehefa manatanteraka ny fizotrany.
Ireo mpampiasa efa nanao ny jailbreak, tsy mila manao azy intsony isika, ary bebe kokoa raha raisintsika fa efa manana ny fanavaozana ny zava-drehetra avy amin'ny Cydia isika. Ity fitaovana vaovao ity dia ho an'ireo izay tsy afaka nigadra satria tsy manana solosaina misy rafitra fikirakirana Windows na tsy te-hametaka milina virtoaly amin'ny Mac-ny.
Raha mbola tsy nanao ny jailbreak ianao, saingy mieritreritra an'izany ianao dia afaka manaraka ny anay Tutorial amin'ny jailbreak iOS 9.0-9-0.2. Ary raha te hahalala izay bitsika mifanaraka amin'ny iOS 9 dia azonao atao ny mitsidika ny lisitry ny tweaks mifanaraka amin'ny iOS 9 (VI).
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Jailbreak » Pangu dia mandefa ny kinova voalohany an'ny jailbreak ho an'ny Mac
Tonga lafatra 100% ny zava-drehetra. Notsapaiko tamin'ny iPad (3 Gen) sy tamin'ny iPhone 5. Tsy nanana olana aho, niandry an'i Pangu ho an'ny Mac nandritra ny andro maro. Misaotra betsaka tamin'ny famoahana azy, io dia ankasitrahana hatrany ny fanavaozana ny vaovao hatrany amin'ny Apple sy ny Jailbreak. Miarahaba anao!
Valiny tamin'i Miguel Vásquez
Salama Miguel. Misaotra anao tamin'ny hevitrao. Heveriko fa ity kinova ity dia tsara kokoa noho ny Windows. Mampalahelo fa tsy handefa azy io aloha kokoa izy ireo. Saika hanaikitra ny iPad-ko amin'ny kinova 1.0.0 an'ny Windows xd
Rodriguez M. Kiin dia hoy izy:
rehefa mivoaka ny windows
izay manipy error runtime avy amin'ny visual c ++
Valiny tamin'i Rodriguez M. Kiin
Tsy mandeha izy io raha manana kopia iTunes itenenana ary tsy misy fomba hanamboarana azy raha tsy averinao amin'ny laoniny ny iphone. Raha misy mahay manamboatra azy dia tena mankasitraka aho. jerena
Apple dia namoaka doka hafa ho an'ny iPhone 6s, amin'ity taona ity no asehon'i Bill Hader